Maxay Ahaayeen Ereyadii Dhul-gariirka Ahaa Ee Uu Varane Ku Yidhi Real - Axadle Wararka Maanta
Manchester United ayaa heshiis la gaadhay Real Madrid oo ay £42 milyan oo Gini kaga iibsatay difaaca reer France ee Raphael Varane oo ay horeba ula sii gaadhay heshiis shaqsi ah, taas oo soo afjartay toddobaadyo wada-hadal iyo hadal-hayn ahaa.
28 jirkan ayaa la sheegay in uu kooxdiisa Real Madrid ku qasbay in ay iibiyaan xagaagan, isagoo u sheegay in aanu u saxeexi doonin heshiis cusub oo uu si bilaash ah kaga tegi doono sannad kaddib marka uu dhamaado qandaraaskiisu.
United ayaa Real Madrid u shubaysa lacag kaash ah oo gaadhaysa £34 milyan oo Gini oo qaddin ah iyo £8 milyan oo kale oo ay dib ka bixin doonto, kuwaas oo ku xidhnaan doona bandhiggiisa ciyaareed.
Markii uu dhacay heshiiska labada kooxood, halyeygii difaaca Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa kashifay sidii uu Varane ugu qasbay kooxdiisa in la iibiyo iyo ereyadii adkaa ee uu ku yidhi Florentino Perez.
Ferdinand oo LIVE kasoo galay bartiisa YouTube ee ‘Rio Ferdinand Presents FIVE’ ayaa yidhi: “Alla muxuu saxeex yahay. Wada hadallo ayaa socday tan iyo markii uu furmay suuqa iibka, waxaanu go’aanka u dambeeyey ka yimid ciyaartoyga.
“Isaga ayaa doonayey in uu tago oo uu qayb ka noqdo mashruuca cusub ee Manchester United ee soo socda. Ole Gunnar Solskjaer ayaa heshiis cusub, Sancho ayaa yimid. Tayada ay halkaas [Varane] ka heleen, awoodda uu u leeyahay inuu kaga garab ciyaaro Harry Maguire. Waxay ila tahay inuu u arkay in uu mashruucani ka wanaagsan yahay wixii uu ku helay Real Madrid haatan.”
Kaddib amaan badan oo uu u jeediyey Varane, Ferdinand waxa kale oo uu sharraxay wixii uu difaacani ku yidhi kooxdiisa Real Madrid, waxaanu yidhi: “Wuxuu ku yidhi Real Madrid: ‘Waan u baahanahay, waan doonayaa, waana in aan tago.’”
Goorta Varane Imaanayo , Goorma Ayuu Messi Saxiixayaa Hishiiska Cuusb